विश्वको सबैभन्दा ठूलो हतियार बजार भारत - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वको सबैभन्दा ठूलो हतियार बजार भारत
काठमाडौं । विश्वमा सबैभन्दा बढी हतियार किन्ने देश कुन होला ? यो खुल्दुली सबैमा हुन्छ । इन्टरनेसनल आम्र्स ट्रान्सफोर्स नामक संस्थाले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत हतियार आयात गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा पहिलो स्थानमा छ ।
भारतले सन् २००८ देखि सन् २०१३ सम्म जति हतियार आयात गरेको थियो त्योभन्दा २४ प्रतिशत बढी हतियार सन् २०१३ देखि २०१७ को अवधिमा आयात गरेको छ ।
याे पनि पढ्नुस भारतदेखि टाढिँदै, चीनसँग नजिकिँदै !
हतियार आयात गर्ने मुलुकहरूको यो सूचीमा भारतपछि क्रमशः साउदी अरेबिया, इजिप्ट, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, चीन, अस्ट्रेलिया, अल्जेरिया, इराक, पाकिस्तान र इन्डोनेसिया छन् ।
याे पनि पढ्नुस विवाहको नाटक गरेर सबै सम्पत्ति लुटिन यी बेहुलीले !
उक्त प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो १ दशकमा चीन हतियार आयातक मुलुकबाट निर्यातक मुलुकमा स्तरोन्नतिसमेत भएको छ ।
चीन हतियार निर्यातमा अहिले अमेरिका, रूस, फ्रान्स र जर्मनीपछि पाँचौं स्थानमा छ । चीनका हतियारको ठूला ग्राहक पाकिस्तान र बंगलादेश हुन् ।
ट्याग्स: India, Weapons